Madaxweyne Xasan oo la kulmay xildhibaan British ah. - Wargeyska Faafiye
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay xildhibaan Tony Baldry oo katirsan baarlamaanka Ingiriiska iyo danjiraha Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Neil Wigan.
Kulanka oo ka dhacay safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho ayay mas’uuliyiintu uga wada-hadleen sidii loo sii horumarin lahaa xiriirka iyo iskaashiga labada dal, gaar ahaan taageerada ay dowladda Ingiriisku siiso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh oo warbaahinta la hadlay kulanka kaddib.
Arrimaha ammaanka, gargaarka bani’aadannimo iyo dib-u-dhiska ayuu sheegay madaxweynuhu inay ka wada-hadleen xildhibaanka iyo danjiraha, ayna isku afgarteen dhammaan waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya London Cabdullaahi Sambalooshe ayaa goobjoog ka ahaa kulanka.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsSudan takes control of Heglig oil fieldMaxkamad ku taal Faransiiska oo Xabsi ku xukuntay Toddobo Soomaali ah.Dastuurka: A/Sunna oo ka digtay masiiboSomali militia release abducted Kenyans.Mahiga oo ka muransan xildhibaanada la diiday.